Swarmify: Izizathu Ezine Zokungasebenzisi Ukushumeka Kwevidiyo ye-YouTube kuwebhusayithi yebhizinisi lakho | Martech Zone
NgeSonto, ngoMashi 28, 2021 NgeSonto, ngoMashi 28, 2021 Douglas Karr
Uma inkampani yakho inamavidiyo ochwepheshe ochithe izinkulungwane zamaRandi kuwo, kufanele ushicilele ngokuphelele amavidiyo ku-YouTube ukusizakala ngemiphumela yosesho lwe-YouTube…. vele uqiniseke ukuthi lungiselela i-YouTube yakho amavidiyo uma wenza. Lokho kusho, akufanele ushumeke amavidiyo e-YouTube kusayithi lakho lenkampani… ngenxa yezizathu ezimbalwa:
I-YouTube ilandelela ukusetshenziswa kwalawo mavidiyo ukukhangisa okubhekiswe. Kungani ungafuna ukwabelana ngenhloso yezivakashi zakho ne-Google ukuze zikwazi ukududula ukukhangisa kwabancintisana nabo?
Ngaphandle kokuthi ukhohlwe, mhlawumbe uyahamba amavidiyo afanele esincintisana nawo kusidlali sakho se-YouTube! Cabanga uvakashela isayithi lakho, ubuke ividiyo yakho, bese ividiyo yakho oyincintisana nayo iboniswa njengenye indlela efanelekile. Hawu!
Kholwa noma ungakukholwa, i-YouTube empeleni kuhamba kancane futhi amavidiyo kaningi awaqali nhlobo kwesinye isikhathi njengoba ividiyo ibhafa. Sawubona… kumahhala, akunjalo? Hhayi… hhayi ibhizinisi elizama ukuvala ikhasimende akulona. Kukhona izindleko ezisheshayo kwi-Intanethi.
Isidlali sevidiyo se-YouTube akusona ngokwezifiso… Qaphela le vidiyo engezansi lapho nginezinketho ezimbalwa engingakhetha kuzo… ukubukela ku-YouTube, chofoza kusixhumanisi ukuze uvule ku-YouTube, Bukela ngokuhamba kwesikhathi ku-YouTube, Yabelana, noma ucindezele ukudlala. Konke kubhalwe nge-YouTube esikhundleni sohlobo lwakho. Kungani kungabi umdlali nje ongenaziphazamiso futhi osebenzayo?
Kufanele ngikweluleke ukuthi uvikele ukusingathwa kwamavidiyo kusayithi lakho. Umgcini wakho wewebhu ojwayelekile akanayo ingqalasizinda yokuhambisa amandla ezinkulungwaneni zezivakashi. Eqinisweni, kunethuba elihle lokuthi uzodabula imingcele ethile yokulanda bese ukhokhiswa ngaphezulu. Impela ufuna ukusingathwa kwamavidiyo… hhayi nje i-YouTube.
Linda umzuzwana, uthi… UDoug… wena njalo shumeka amavidiyo we-YouTube kusayithi lakho. Hhayi-ke, bantu, lokhu kuyincwadi… hhayi indawo yebhizinisi. Empeleni ngiyakuthanda ukushumeka amavidiyo avela ku-YouTube ukuze abadali bathole ukubukwa okwengeziwe namathuba abantu okubathola nokuwabhalisela. Uma ngenzelwa amavidiyo wami osezingeni eliphezulu ngebhizinisi lami, ngiyobe ngiwasingatha ngokuphelele Hlanganisa.
Kukhona okunye, okuhlukile ... uyi-YouTuber!
Swarmify SmartVideo: Ukusingathwa Kwevidiyo Okusheshayo
I-Swarmify inikeza isisombululo esinamandla futhi esheshayo sokubamba ividiyo kuwebhusayithi yakho yebhizinisi. Nayi ividiyo yokubuka konke:
Hlanganisa inikeza ezinye izici ezinhle:
CDN - Banomhlaba jikelele inethiwekhi yokulethwa kokuqukethwe (CDN), okusho ukuthi kuncane kakhulu ukubambezeleka phakathi komuntu ocela ividiyo nokuthi isatshalaliswa kuphi.
Ukudlala-Mahhala Ukudlala - I-SmartVideo isebenzisa isisombululo sokulethwa kwelungelo lobunikazi esalindwe yi-Swarmify, kunciphisa kakhulu ukuphuma kwamathebula ngo-8x.
Ukusakazwa Okuqhubekayo Kwevidiyo - Kukho konke ukudlala, i-SmartVideo iyaqhubeka ngokuqapha ulwazi lwevidiyo lomsebenzisi ngamunye futhi ivimbela ukwehluleka ngaphambi kokuba kwenzeke.
Ukufakwa kwekhodi yedivayisi - Izivakashi zenzelwe ividiyo ukulungiselela idivayisi yazo ukuletha umuzwa omuhle kakhulu. Akukhathazi futhi kuvuselelwa ngokuzenzakalela kumadivayisi amasha.
Isidlali Esihlanzekile, Esinokuphazamiseka - Yenza ukuthengisa okuningi, futhi unciphise amazinga wokugcina ngokugcina izivakashi zigxile kumkhiqizo wakho. Amalogo amakhulu namavidiyo ahlobene aklanyelwe ukuthatha amakhasimende akho.
Iphasiwedi ye-WordPress - Akunasidingo sokudlikiza ngezikripthi nokushumeka, i-SmartVideo ine-plugin yokukusiza usebenze kalula.
Zamanani - Akufanele ujeziswe ngokuthumela okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu kusayithi lakho. Yingakho ukukhokhiswa kwe-SmartVideo kungasekelwe kumkhawulokudonsa, kuphela ukubukwa kwevidiyo.
Nakhu ukuqhathaniswa kwecala necala:
Ukushumeka kwevidiyo ye-YouTube
Uma lokho kunganele, i-SmartVideo ilanda amavidiyo akho ngokuzenzakalela ku-YouTube, iyawafaka amakhodi bese iyawagcina. Ngemuva kwalokho, isidlali se-YouTube sithathelwe indawo ngokuphelele futhi amavidiyo akho asingathwa kwinethiwekhi yethu yokulethwa komhlaba futhi anikezwe ngobuchwepheshe bethu bokudlala obusheshayo.
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene naye Swarmify SmartVideo.
Tags: ukubhafaukusingathwa kwamavidiyo ebhizinisiukusingathwa kwamavidiyo ezinkampaniukusingathwa kwamavidiyo okusheshayoimvideoququdaividiyo cdni-encoding yevidiyoumphathi wevidiyoukubamba ividiyoplugin wordpressOkuhlukile kwe-YouTube